ललितपुर काण्ड : अन्जनाको बुवा पहिलो पटक मिडियामा,चल्यो रुवाबासी ! आमा अस्पताल भर्ना (भिडियो सहित) – PanchKhal Online
Home/भिडियो/ललितपुर काण्ड : अन्जनाको बुवा पहिलो पटक मिडियामा,चल्यो रुवाबासी ! आमा अस्पताल भर्ना (भिडियो सहित)
6,456 1 minute read
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा ‘सुन साइली’ बोलको गीतले निकै राम्रो चर्चा कमायो। गीतमा अडियो इन्जिनियरिङ गरेका थिए उज्वल महतले। उनै सुन्दर गीतका म्युजिसियनमाथि बिहीबार गम्भीर आरोप लागेको छ। आफ्नै घरमा बुहारीको निर्मम हत्या गरेको आरोपमा अहिले उनी प्रहरी खोरमा छन्।
थामिएन कसैको आँशु अंकीत संग्रौलाको भाषणले हलभरिका सबै मनिसमा रुवाबासी (भिडियो सहित)